Kedu ka Black Air Force 1 si bụrụ omenala ndị na -eme snịịka Meme - Ndị Na -Ekwu Okwu
Kedu ka Black Air Force 1 si bụrụ omenala ndị na -eme snịịka Meme
Anaghị m echeta mgbe e kpebiri na Black Air Force 1 niile bụ akpụkpọ ụkwụ mbinye aka nke mebiri emebi. Naanị m na -echeta na onweghị onye na -eyi ha ụma ọ gwụla ma ha na -arụ ọrụ na kichin, na -apụnara mmadụ ihe maka ndụ ha, ma ọ bụ na ha bụ dopeheads. Ọ bụghị mmadụ ọ bụla chepụtara tiori a, a ghọtara ya.
achicha igbe chocolate na ude mmiri
Dopeheads na crackheads na agbataobi m tolitere na-eyi ha naanị, yana ndị mmadụ na-eyi ha ka ha na ha rụọ ọrụ iberibe n'ihi na ha dị mma karịa nkwonkwo ọnụnọ na-enweghị ntụpọ nke a ga-amanye ha ịzụta. Igbe igbe dị na AF1 ojii na -adakasị ka akwụkwọ mgbe ha na -eyi ọtụtụ oge. Ha dị ka onye na -eji aka mechiri emechi na -agagharị n'ime ha, gbakwunyere na ha na -agbagọ mgbe ị na -ewepụ ha mgbe ogologo ụbọchị ịgbapụ, na -ese anwụrụ, na -apụnara mmadụ ihe, na/ma ọ bụ na -asacha efere. Akpụkpọ ahụ na -amalite inwe mmetụta ma yie plastik, kwa. Ọbụghị naanị na ha bụ uwe nke uzuzu uzuzu, uzuzu uzuzu, ha ga -abụ uzuzu uzuzu. Nke a bụ ihe kpatara na mmadụ nkịtị anaghị azụta ha.
Yabụ na ọ mara mma nke ukwuu ịhụ ka etinyere echiche agbata obi a na -enweghị mgbagha na mgbasa ozi mmekọrịta ma a bịa na foto nke ndị yi ojii ojii ojii niile 1s, ọkachasị mgbada. Onye ji ụma zụta ha bụ onye a na -enweghị ike ịtụkwasị obi. Ị ga -ajụ ajụjụ ebumnobi ha ozugbo. Ndị a enweghị nkwanye ùgwù maka nchekwa gị ma ọ bụ nke ha. Dịka ọmụmaatụ, otu n'ime ụmụnne nna m ndị nwoke na -eji akwa jaket na -esi nri esi nri niile ojii AF1 Lows wee jiri nchara igwe ọ mere n'ụlọ ahịa mgbe ọ nọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị (na 80s!) Tụnye ya n'akpa dị n'ime. Biko wepụta oge chee ihe ahụ. Ụdị ndị a siri ike ịtụkwasị obi - ọ bụ nke ị ga -achọ n'aka ndị otu gị n'ihi na ị chọghị igwu egwu megide ha. Nwanne nna nna m na ihe ndị ya na ya bụ Patrick Beverley: ụzọ ojii ojii ojii n'ụdị mmadụ.
N'oge ngosi ya na Full Size Run , Meyhem Lauren kwuru, 'Echeghị m na emela m mpụ nke na -eyighị Black Air Force 1s,' na -egosi na akpụkpọ ụkwụ nwere ntụkwasị obi n'okporo ụzọ siri ike.
Enwekwara skit 'Black Air Force 1 Activity' nke na -aga gburugburu YouTube.
Echere m na convo n'ịntanetị banyere ndị agha ojii malitere ịrịa mgbe Esere Drake na ihe atụ Malaika Terry . Ndị a gọziri site na ihe ọmụma mkpuchi ihe mere ka ọ pụta ìhè na ihe agaghị aga nke ọma n'ihi na Terry na -eyi uwe ojii AF1 ojii mgbe ya na onye na -eme ihe nkiri kachasị n'ụwa. Somefọdụ tụrụ aro ka Drake lelee obere akpa ya n'ihi na ọ ga -ebo ebubo egwuregwu ahụ n'aha ya. Nchọgharị ngwa ngwa Twitter ga -ekpughere nnukwu akụ nke ọdịnaya AF1 ojii, na -eme ka ọ bụrụ ihe egwuregwu na -atọ ọchị kacha mma metụtara ndị na -agba snịịka. Ọ dị m ka ya bụrụ na etinyere ụdị nlelị a na wedge wedker, mana nke ahụ nwere ike bụrụ edemede ọzọ maka ụbọchị ọzọ. Cheedị na obere mkpụmkpụ na -agbago ruo ụbọchị ya na Black Air Force 1 sneaker wedges, n'agbanyeghị? Ọ nwere ike ịmasị ... nweta ya?
Ị ga -enwe obi ike ịsa ya ebe ọ bụla ọ dị njọ? Ọ ga -esiri m ike ijide ire m ma ọ bụ ghara igosi ụdị mmetụta ọ bụla. Dị ka, mama, gịnị kpatara ị ji eyi ndị ahụ?
Ụmụ nwanyị ọcha ga-esi nri AF1 ọcha ruru unyi nwere eriri mop maka eriri, na akpa unyi dị na mkpuchi ga-enwe ntụ ojii AF1 uzuzu uzuzu dị n'aka ha. Mgbe ị hụrụ ndị a n'ihu ọha, biko jiri nlezianya gaa n'ihu. Ha enweghị mmasị na ndụ mmadụ, ọbụnadị nke ha. Atụmatụ a abụghị egwuregwu ma ọ bụ meme Twitter, atụmatụ a bụ maka ọdịmma gị. Ị nwere ike ịkọ ọtụtụ ihe gbasara mmadụ site na akpụkpọ ụkwụ ha na -eyi, yabụ ka nke a bụrụ ihe mmụta nye ndị na -esighi na mkpuchi ma ọ bụ ghetto dị ka ọtụtụ n'ime gị na -amasị ịkpọ ya. Debe anya gị maka ndị isi ojii mgbe ị nọ n'okporo ụzọ ndị a. Ndị na -eyi ndị a bụ ndị ohi ma ọ bụ nwee ọtụtụ ihe ike ime ihe ike. Nke a nwere ike ịpụta dị ka echiche efu, mana ọ bụ usoro isi mkpịsị aka nke chebere m ndụ na ndụ. Ọ bụrụ na ị na -elekọta ụlọ ma ọ bụ na -arụ ọrụ na kichin, ị dị mma n'akwụkwọ m, n'agbanyeghị. Nwee nchebe ebe ahụ ma zere akwụkwọ.
onye egwuregwu basketball kacha mma n'ụwa
esi mee ka ntu oyi na akwa ọcha na sugar
terrence j ihe nkiri na ihe onyonyo
esi mee pancakes na sourdough Starter
swiiti chocolate gbara gburugburu na etiti caramel